Socdaalka Virtual ee Xanaanada caruurta ee Minnewashta
La cusbooneysiiyay Qorshaha Kooxda ee Dalxiisyada Dugsiyada
Xayiraadaha COVID awgood, sanad dugsiyeedkan, ma sameynayno booqashooyinkeenii caadiga ahaa ee dugsiga. Taabadalkeed, waxaan kugu dhiirigalinaynaa inaad sameyso waxyaabaha soo socda:
Dib Kindergarten Options slideshow iyo Minnewashta Kindergarten Tour video , iyo
Akhriso dukumiintiyada iyo ilaha aan ku wadaagnay Mawduucyada Hadalka iyo Horumarka Luqadda , Qoraalka Xannaanada , Baaritaanka Carruurnimada Hore iyo Baadhayaasha Daryeelka Carruurta .
Intaas waxaa sii dheer, waxaan ku faraxsanahay inaan marti galino wadahadal la socosho Google Meet ah oo aan kula yeelano, si aan uga jawaabno su'aalaha gaarka ah ee laga yaabo inaad ka qabto Kindergarten-ka ilmahaaga. Waad jadwalan kartaa adigoo la xiriiraya Kaaliyaha Madaxa Xafiiska Minnewashta, Carol Johnson lambarka 952-401-5500 ama carol.johnson@minnetonkaschools.org
Baadhitaankan ayaa looga baahan yahay Gobolka Minnesota dhammaan carruurta da'doodu tahay dugsiga barbaarinta (da'doodu tahay saddex illaa shan jir), ka hor intaanay gelin dugsiga dadweynaha. Haddii aad horey u dhammeystirtay baaritaanka iyada oo loo marayo Minnetonka, waad wada diyaar tahay! Haddii baadhitaankan lagu dhammaystiray degmo kale, fadlan soo-koobidda Soo-koobidda Baadhitaanka ilmahaaga marka aad gudbineyso shahaadada dhalashada iyo caddeynta cinwaanka xilliga diiwaangelinta.
Haddii ilmahaagu weli u baahan yahay inuu dhammaystiro Baaritaanka Carruurnimada Hore, halkan iska qor .
Sahamiyayaal (Daryeelka Ilmaha)
Tayo sare barnaamijyada daryeelka caruurta kahor iyo kadib iskuulka ee loogu tala galay caruurta da'doodu tahay seddex ilaa fasalka shanaad.
Waxbadan ka baro Naadiga Baadhayaasha .
Haddii aad ku cusub tahay Dugsiyada Minnetonka (qoyska deggan ama qoys diiwaangashan oo la oggol yahay), waxaa laga yaabaa inaad naftaada weydiiso waxa xiga ee aad sameynayso. Hoos waxaan ku soo uruurineynaa liistada kheyraadka waxtarka u leh waalidiinta ardayda ku cusub Minnetonka, ha ahaadaan xanaanada, dugsiga hoose, dugsiga dhexe ama dugsiga sare.
Eeg Liiska Hubinta Qoyska Cusub .